သတင်း - လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် ကသိုဒ့်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း။
လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် ကသိုဒ့်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း။
လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်လည်း ဘက်ထရီကုန်ကျစရိတ်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။cathode ပစ္စည်းများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များစွာ ရှိပြီး ပေါင်းစပ်မှု လမ်းကြောင်းသည် အတော်လေး ရှုပ်ထွေးပြီး အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အညစ်အကြေး ပါဝင်မှု ထိန်းချုပ်မှုမှာလည်း အတော်လေး တင်းကျပ်ပါသည်။ဤဆောင်းပါးသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
cathode ပစ္စည်းများအတွက် လီသီယမ်ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်များ
မြင့်မားသောတိကျသောစွမ်းအင်၊ မြင့်မားသောတိကျသောပါဝါ၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်မှုနည်း၊ စျေးနှုန်းချိုသာမှု၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောဘေးကင်းမှု။
Lithium ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
Calcination နည်းပညာသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အခြောက်ခံရန်အတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အခြောက်ခံနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး သမားရိုးကျ လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အခြောက်ခံနည်းပညာဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အခြောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးကာ အရင်းအနှီးလည်ပတ်မှု နှေးကွေးစေကာ အခြောက်ခံမှု မညီညာခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းအတိမ်အနက် မလုံလောက်ပါ။သီးခြားအင်္ဂါရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
1. လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းအတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အခြောက်ခံကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည် လျင်မြန်ပြီး မြန်ဆန်ပြီး နက်ရှိုင်းသော အခြောက်ခံမှုကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အပြီးသတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု တစ်ထောင်ကျော်အထိ ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။
2. အခြောက်ခံခြင်းသည် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်၏ အခြောက်ခံမှု အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသည်။
3. လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ cathode ပစ္စည်းသည် အလွန်ထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ဘေးကင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊
4. ၎င်းတွင် အပူဓာတ်မ၀င်ဘဲ၊ အပူ၏ ချက်ချင်းထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် sintered လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ cathode ပစ္စည်းသည် လျင်မြန်သောအပူနှုန်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်အသုံးချမှုနှုန်း၊ မြင့်မားသောအပူထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှု၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်ပြီး ထုတ်ကုန်၏တူညီမှုနှင့် အထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေပြီး အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ sintered ပစ္စည်း၏။
လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်း၏အထွေထွေပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်း
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ လီသီယမ်ကာဗွန်နိတ်နှင့် ကိုဘော့ဒြပ်ပေါင်းများ သို့မဟုတ် နီကယ်ဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့ လီသီယမ်ဆားများကို ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ရောစပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး၊ ထို့နောက် လောင်ကျွမ်းစေသည့်တုံ့ပြန်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ဤနည်းလမ်း၏ အားသာချက်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကြမ်းများကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုတေသနပြု၊ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားနည်းပညာသည် အတော်လေး ရင့်ကျက်ပါသည်။တည်ငြိမ်မှု ညံ့ဖျင်းပြီး တစ်သုတ်မှ တစ်သုတ် အရည်အသွေး ညီညွတ်မှု အားနည်းသည်။
ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းသည် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းနှင့် ကိုဘော့ သို့မဟုတ် ဗန်နေဒီယမ်အိုင်းယွန်းများပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသောရှေ့ပြေးနိမိတ်ကို ရှေးဦးစွာပြင်ဆင်ရန် အော်ဂဲနစ်ရှုပ်ထွေးမှုကို အသုံးပြုကာ ပြင်ဆင်ရန် sinter ဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်း၏ အားသာချက်များမှာ မော်လီကျူး-စကေးရောစပ်ခြင်း၊ ကောင်းသောပစ္စည်း တူညီမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တည်ငြိမ်မှုနှင့် အစိုင်အခဲအဆင့်နည်းလမ်းထက် အပြုသဘောဆောင်သော အီလက်ထရုဒ်ပစ္စည်း၏ စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။၎င်းကို လီသီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးနည်းလမ်းအဖြစ် ပြည်ပတွင် စမ်းသပ်ထားသော်လည်း နည်းပညာမှာ ရင့်ကျက်မှုမရှိသေးဘဲ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်သာရှိသည်။.
3. Sol-gel နည်းလမ်း
အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းကိုပြင်ဆင်ရန် 1970 ခုနှစ်များတွင်တီထွင်ခဲ့သော ultrafine အမှုန်များကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဤနည်းလမ်းသည်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်း၏အားသာချက်များရှိပြီးပြင်ဆင်ထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောလျှပ်စစ်စွမ်းရည်ကိုအလွန်တိုးတက်စေသည်။နည်းလမ်းတစ်ခု။အားနည်းချက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး နည်းပညာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်သာ ရှိသေးသည်။
အိုင်းယွန်းလဲလှယ်နည်းဖြင့် ပြင်ဆင်သည့် LiMnO2 သည် မြင့်မားသော နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း 270mA·g/g ရရှိထားသည်။ဤနည်းလမ်းသည် သုတေသနဟော့စပေါ့အသစ်ဖြစ်လာသည်။၎င်းတွင်တည်ငြိမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။သို့သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖြေရှင်းချက်ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း နှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းကဲ့သို့သော စွမ်းအင်သုံးစွဲခြင်းနှင့် အချိန်ကုန်ခြင်းအဆင့်များပါ၀င်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမှ အတော်အတန်အကွာအဝေးရှိပါသေးသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း-
လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီ ကတ်သိုဒ့်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်။စွမ်းအင်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအသစ်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းတို့နှင့်အတူ လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်နှင့် တာနရီပစ္စည်းများ အပိုင်းခွဲပိုင်းခွဲထားသော လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်နှင့် ternary ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ cathode ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ အနာဂတ်တွင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။စိန်ခေါ်မှုများ။
လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် တည်ငြိမ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် စုစုပေါင်းလိုအပ်ချက်သည် 2019 ခုနှစ်တွင် 130Gwh သို့ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီအသုံးချနယ်ပယ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ချဲ့ထွင်လာမှုကြောင့်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီကတ်သိုဒ့်ပစ္စည်းများသည် ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ .
စွမ်းအင်သုံးကားအသစ်များ၏ ပေါက်ကွဲအားကြီးမှုသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လီသီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများသည် 2019 ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် 300,000 ထက်ကျော်လွန်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် ternary ပစ္စည်းများသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် ဒြပ်ပေါင်းကြီးထွားမှုနှုန်း 30% ထက် ပိုပါသည်။အနာဂတ်တွင် NCM နှင့် NCA သည် မော်တော်ကား cathode ပစ္စည်းများ၏ အဓိကရေစီးကြောင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ပြင်ပပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုသည် 2019 ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဥ်ပစ္စည်းများ၏ 80% ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် ဘက်ထရီ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ cathode ပစ္စည်းဈေးကွက်သည် အလားအလာရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာရှိသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ 3G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးကားသစ်များကို အကြီးစားစီးပွားဖြစ်ရောင်းချခြင်းသည် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။Lithium ဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများသည် ကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်တစ်ခု ရှိသည်၊ အလားအလာများသည် အလွန်အကောင်းမြင်ပါသည်။